केटा र केटी आआफ्नै ठाउँमा- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
‘केटाले जस्तै केटीले गर्न किन नहुने ?’ लेखमा म अलि सहमत हुन सकिन  । पुरुषहरूले गर्दै आएकै कामकारबाही महिलाहरूले गर्नु आवश्यक छैन  ।
जति पनि महिला सम्बन्धी घटनाहरू घटेका छन्, गलत संस्कार र संस्कृतिको सिको गरेरै भएका हुन् । संस्कृति सुहाउँदो पोसाकमा आफ्नो बाटो हिँडे कसले कसलाई छुने वा जिस्क्याउने हिम्मत गर्छ र ? बस्ने नेपालमा, संस्कृति अवलम्बन गर्ने पश्चिमको ! अझ मन मिलुन्जेल लिभिङ टुगेदर, नमिले बलात्कारको आरोप ! यो कहाँसम्मको न्याय हो ? जन्मघरबाट कर्मघर वा भनौँ पतिको घरमा गएदेखि नै महिलाको शासन सुरु हुन्छ ।
लेखकले उठाएको घटनाप्रति म संवेदनशील छु । यस्ता प्रतिनिधि नभएका होइनन् । तर सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर तौलिनचाहिँ नमिल्ला । महिलाहरू पहिलाको तुलनामा धेरै सचेत र सक्षम छन् । उनीहरूको उन्नयनका लागि सबैको सहयोग त्यतिकै अपरिहार्य हुन्छ । तर महिला अधिकारका नाममा सार्वजनिक बसमा आरक्षण सिट सङ्ख्या तोकिदिँदा चार महिलाले मात्र बस्न पाउने भए । अरू सिटमा अरूहरूकै बर्चस्व भयो । पहिला–पहिला गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक वा महिला देख्ने बित्तिकै सिट छोडिदिन्थे, अरू यात्रुले । अचेल अन्कनाउने गर्छन् ।
– लक्ष्मण प्रधान, मीनभवन, काठमाडौँ
प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४९
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र र जनताभन्दा आफू कसरी बलियो बन्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेका देखिन्छन्  । सरकार हरेक संवैधानिक अंगलाई कमजोर बनाउन तल्लिन छ  ।
मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतलाई कमजोर पारे सरकारचाहिँ कसरी बलियै रहला ? सरकार, संवैधानिक अंगहरू संविधानकै दायरामा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । दुई तिहाइको दम्भ गरेर निरंकुश हुने प्रयास गर्दा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । जनमतको कदर गर्न जाने लोकतन्त्र सबल हुँदै जान्छ । सरकार चाहिँ जनमतको कदरभन्दा पनि सनकका भरमा चलिरहेको छ । आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई छुनु छैन, विधेयकमाथि विधेयक ल्याउन हौसियो । गम्भीर सोचविचार नगरी, हचुवाको भरमा ल्याउन लागिएकाले नै ती विधेयकका विषयमा सरकार आलोचित बन्नुपर्‍यो । आखिर, पहिले भन्दै आए जस्तो बहुमत नभएर कुनै पनि सरकारले देश विकासको काम गर्न नसकेको त होइन रहेछ ! नत्र यो नेकपा सरकारले यतिन्जेल धेरै काम गरिसक्नुपर्ने थियो ।
प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४८
किनेको गोल्ड मेडल
घाम जाला बरु, जाम खुल्दैन
काम नगर्ने, कर मात्र उठाउने
कसले कसलाई ढाँट्यो ?